Fahfaahin: Weerar lagu qaadey Hotel ku yaalla Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax culus oo galabta ka dhacay Xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ku yaallaan goobo loo dalxiis tago iyo dhismooyin casri ah.
Qaraxa oo ka dhashay Gaari lagu soo xiray walxo qarxa, ayaa ka dhacay afaafka hore ee hotel-ka Elite oo xeebta ku yaalla, waxaana xigay rasaas xooggan oo la maqlayay mudo daqiiqado ah, taasoo aan la ogeyn cida ridayso.
Warar hordhac ah oo khasaaraha ku saabsan ayaa sheegaya in 10 qof dad gaaraya ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo loola cararay Isbitaallada magaaladda Muqdisho.
Ciidanka dowladda ayaa goobta gaarey daqiiqado kadib qaraxa, waxaana la xiray hotel-ka oo albaabkiisa qaraxa ka dhacay, iyadoo uu socdo howgal lagu xaqiijinayo amniga.
Ma jirto illaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxa, balse waxaa loo maleynayaa Kooxda Al-Shabaab oo falalka noocan ah looga bartay inay ka fuliso dalka, gaar ahaan Muqdisho.
0 Comments Topics: elite hotel qarax
Warar 29 November 2021 13:17
SAWIRRO: Qarax Gaari oo gil-gilay Muqdisho
Warar 25 November 2021 8:55